Waa Kuwee Labada Ciyaartoy Ee Man United Ka Tirsan Ee Farxadda Geliya Sir Alex Ferguson? - Maaha Fernandes & Pogba - Gool24.Net
Waa Kuwee Labada Ciyaartoy Ee Man United Ka Tirsan Ee Farxadda Geliya Sir Alex Ferguson? – Maaha Fernandes & Pogba
July 12, 2020 Mahamoud Batalaale
Tababarihii hore ee Manchester United ee Sir Alex Ferguson, waxa uu waqtigan ku raaxaystaa daawashada ciyaartoyda kooxdiisa, gaar ahaan laba ka mid ah xiddigaha uu Ole Gunnar Solskjaer sida cajiibka ah sare ugu soo qaaday ee bandhigga fiican ka samaynaya Old Trafford.
Sir Alex Ferguson oo ay da’diisu tahay 78 jir, waxa hadda u muuqanaysa in naadigii uu guulaha badan u horseeday ay dib usoo ceshanayso haybaddii ay lahayd, isla markaana ay heshay tayadii ka luntay markii uu isagu ka tegay.
Sida uu qoray wargeyska Mirror, Sir Alex Ferguson waxa uu la dhacsan yahay qaabka uu Solskjaer kooxda dib ugu soo nooleeyey, gaar ahaan natiijooyinka ay qaybtii dambe ee xili ciyaareedka ka keenaysay kooxdu, iyadoon laga badin 17 kulan oo xidhiidh ah.
Arrinta uu sida aadka ah isha ugu hayay Sir Alex Ferguson waxay tahay isbeddelka dhinaca weerarka oo Red Devils ay mar kale noqotay naadi laga cabsado oo haysata ciyaartooyo tamar iyo tayo leh, kuwaas oo afar ciyaarood oo xidhiidh ah dhaliyey min saddex gool iyo ka badan.
Bruno Fernandes oo Manchester United yimid bishii January ayaa ah ciyaartoyga loo nisbaynayo isbeddelka ku dhacay Red Devils, horena waxa laacibka ugu tayada badan ee joogay usii ahaa Paul Pogba, iyadoo markii uu laacibka reer France kasoo laabtay dhaawaca ee ay is heleenna, ay abuureen is-faham iyo bandhig cajiib ah.
Laakiin Sir Alex Ferguson labadan ciyaartoy maaha kuwa xiisaha geliya ee uu daawashadooda ku farxaa, waxaana dad la joogay uu u sheegay Ferguson, sida uu wargeyska Mirror qoray, in Scott McTominay iyo Mason Greenwood ay farxad geliyaan.
“Waxa uu farxad ka helaa ciyaartoyda da’da yar ee soo baxay sida Scott McTominay iyo Mason Greenwood.” Ayuu qof ka agdhow Ferguson u sheegay wargeyska.
Si kastaba ha ahaatee, Manchester United ayaa fursad u haysata inay soo gasho afarta kaalmood ee ugu sarreeya haddii ay Isniinta guul ka keento ciyaarta ay ku qaabilayso Southampton, iyagoo ka faa’iidasan kara Chelsea oo Sheffield United ay ka adkaatay Sabtidii.